“गाउँपालिकामा महामारी न्यूनीकरण गर्न भनेर ५० लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरेका छौं” – खबर नेटवर्कस्
खबर नेटवर्कस् > खबर नेटवर्कस् > “गाउँपालिकामा महामारी न्यूनीकरण गर्न भनेर ५० लाख रुपैयाँको स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरेका छौं”
विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसको कारण हाल सारा विश्व नै ठुलो सङ्कटमा छ । विभिन्न देशहरू यो सङ्कटलाई परास्त गर्न लागिपरेको भएता पनि संक्रमणलाई नियन्त्रण गर्न सफल चाहिँ भएको छैन ।
नेपालमा पनि सामाजिकस्तरमा कोरोना भाइरसको महामारी व्यापक रूपमा फैलिएको धेरै समय भइसकेको छ भने यसको रोकथाम र नियन्त्रणका लागि निषेधाज्ञाको प्रयोग गरी राखिएको छ । तर, पछिल्लो समयमा संक्रमितहरूको संख्यामा केही कमी आएको र निषेधाज्ञालाई खुकुलो बनाइँदै गएको छ । निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै संक्रमण फैलिनसक्ने जोखिम पनि उच्च छ । यस महामारीबाट बागमती प्रदेश अन्तर्गत मकवानपुर जिल्लाको राक्सिराङ्ग गाउँपालिका पनि प्रभावित बन्न पुग्यो ।
यसैक्रममा हिजोआज गाउँपालिकाले कोरोनाको रोकथाम एवं नियन्त्रणका लागि गरिरहेको गतिविधि, स्थानीय तहमा निर्वाचित भएर आएपछि जनप्रतिनिधिहरुले गाउँपालिकामा गरेका विकास निर्माणको काम लगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर सो गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निर्मला हिम्डुङसँग विकासन्युजका लागि राजिब न्यौपानेले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
कोरोना रोकथाम तथा न्यूनीकरणको लागि गाउँपालिकाले के गरिरहेको छ ?
विश्व महामारीका रूपमा फैलिएको नयाँ भेरियन्टको कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण हाम्रो गाउँपालिका पनि अछुतो रहन सकेन । यस महामारीलाई नियन्त्रण गर्नका लागि गाउँपालिकाको तर्फबाट सम्पूर्ण प्रयास जारी राखेका छौं भने उच्चतम सतर्कता पनि अपनाएका छौं । समुदायमा कोभिड संक्रमणलाई रोक्न समयमै गाउँपालिकाले माइकिङ गर्ने, सचेतनाका विभिन्न सूचनाहरू प्रकाशन गर्ने, टोलटोलमा साबुन पानीले हात धुने व्यवस्था र सरसफाइलाई जोड दिँदै आएको छ । त्यसैले धेरै मानिसहरू संक्रमित हुनबाट जोगिए ।
गाउँपालिकाले समुदायस्तरमै पुगेर स्वाब सङ्कलन गर्ने, कोरोनाका लक्षण देखिएकालाई तत्कालै एन्टिजेन परीक्षण गर्ने, घरदैलोमा अनुगमन तथा सङ्क्रमतिसँग भेटघाट गर्ने, औषधि वितरणका साथै सिकिस्त बिरामीलाई एम्बुलेन्समार्फत अस्पतालमा लैजाने व्यवस्था गरेका छौं । पालिकामा संक्रमण बढ्दै जाँदा २४ बेडकाे आइसोलेसन कक्ष पनि बनाएका छौं । बाहिरी जिल्लाबाट आउने वा लक्षण देखिएका व्यक्तिहरूलाई तत्काल होम क्वारेन्टाइनमा राख्ने र उनीहरूको स्वास्थ्य परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने गरेका छौं । स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी र जनप्रतिनिधि साथीहरूको सक्रियतामा हामीले यसका बारेमा शुरुदेखि नै सचेतनामा जोड दियौं ।
गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमणको पछिल्लो अवस्था कस्तो छ ?
दोस्रो लहरेको कोरोना भाइरस सुरुसुरुमा पालिकामा पनि व्यापक रूपमा फैलिएको छ । पछिल्लो समय संक्रमण दर घटेको छ भने धेरैजसो बिरामी निको भएका छन् । असर १५ गतेको तथ्याङ्क अनुसार पालिकामा हालसम्म १ सय ४० जना कोरोना सङ्क्रमणमुक्त भएका छन् । हालसम्म ६ सय ८४ जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा एन्टीजेटमाफर्त १ सय ७२ जना संक्रमित पुष्टि भएको छ । अन्य अस्पतालमा परीक्षण गराई आएका संक्रमितको संख्या २ रहेको छ । महामारी नियन्त्रण गर्नको लागि धेरै ठुलो संर्घष गर्दागर्दै पनि पालिकाले २ जना नागरिकहरूलाई कोरोनाका कारण गुमाएको छ । हालसम्म १ सय ५४ जना होम आइसोलेसनमा बसेका छन् भने राक्सिराङ्ग कोभिड अस्पतालमा २० जनाले उपचार सेवा पाएका छन् ।
गाउँपालिकाले आफ्नो क्षेत्रमा राहतका प्याकेजहरू पनि ल्याएको छ कि ?
हामीले पालिकामा राहत प्याकेजहरू ल्याएका छौं । जो दैनिक काम गरेर गुजारा चलाउने वर्ग छ उनीहरूको समस्या हामीले मुख्य रूपमा लिएका छौं । गरिब र आर्थिक स्थिति कमजोर भएका परिवारलाई पालिकाबाट राहत वितरण गरिएको हो । कोरोना संक्रमित भएका विपन्न वर्गको लागी चामल, नुन, तेल आदि वितरण गरेका छौं भने अन्यलाई गरेका छैनौं । जो कोभिड प्रभावित छन्, जसले ज्याला मजदुरी गरेर परिवार पाल्छ, जसले यो समयमा कामै गर्ने सक्दैन, त्यस्तो व्यक्तिलाई मात्र हामीले राहत दिन्छौं । कोभिड बढ्दै गयो भने राहतको कार्यक्रमहरू ल्याउनु पर्ने अझ आवश्यक र अनिवार्य हुनेछ । ३ ओटा वडामा राहत वितरण गर्न अझै बाँकी नै छ । हालसम्म गाउँपालिकाका २५ सय घरपरिवारलाई राहत वितरण गरेका छौ ।
कोरोना नियन्त्रणमा गाउँपालिकालाई के–कस्ता समस्या छन् ? अबका चुनौती के छन् ?
चुनौती र समस्या त धेरै छन् । यस महामारीलाई न्यूनीकरण र व्यवस्थापन गर्नको लागि अर्थको आवश्यकता छ । गाउँपालिकाले कोभिड व्यवस्थापन कोष भनेर आगामी योजनामा राखेको छ । पालिकामा महामारी न्यूनीकरण गर्नको लागि ५० लाख रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य सामाग्री खरिद गरेका छौं । पालिकाले खरिद गरेका स्वास्थ्य सामाग्रीले मात्र महामारी न्यूनीकरण गर्नको लागि नपुगे पछि विभिन्न संघसंस्थाले पनि पालिकालाई स्वास्थ्य सामाग्री दिएर सहयोग गरेका छन् ।
तपाईं निर्वाचित भएर आएको ४ वर्ष पुरा भएको छ भने तपाईंहरु अन्तिम वर्षको कार्यकालको दौरानमा पनि हुनुहुन्छ, यो अवधिमा महत्वपुर्ण काम केके भए नि ?
हामी जनप्रतिनिधि भएर आउँदा जनताको आधारभूत आवश्यकता, पूर्वाधारको अवस्था निकै कमजोर एवं जीर्ण थियो । हामी पालिकामा निर्वाचित भएर आएपछि विकास निर्माणका कामहरू धेरै भएका छन् । निर्वाचितपछि पालिकाको सबै ठाउँमा बाटो विस्तारको कामलाई प्राथमिकतामा राखेर अघि बढियौं । अहिले हरेक वडामा सडकको पहुँच पुगेको छ भने टोल टोलमा सडक पुर्याउन पनि सफल भएका छौं । सिँचाइ र खानेपानीमा पनि उल्लेख्य काम भएको छ । विद्युतीकरण गर्ने कार्य पनि भइरहेको छ ।
स्थानीय सरकार बनेपछि पालिकाले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र पूर्वाधार लगायतका क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ काम गरिरहेको छ । शिक्षा क्षेत्र तर्फको कुरा गर्दा गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालय भवन, शिक्षक पदपूर्ति गर्ने काम भएका छन् । स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि हामीले महत्वपुर्ण काम गरेका छौं भने प्रत्येक वडामा स्वास्थ्य इकाईको स्थापना गरेका छौं । गाउँपालिका पनि विस्तारै विकास र सम्बृद्धितर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ । हामी निर्वाचित भएर आएपछि हरेक क्षेत्रमा सुधार र परिवर्तन आएको छ ।
निर्वाचनका बेला जनतासामु गरिएका प्रतिबद्धता के कति पूरा गर्नुभयो?
हामीले घोषणापत्रमा लेखेका कुरा तथा निर्वाचित हुँदा बोलेअनुसारका काम धेरै पुरा गरिसकेका छौं । पूरा गर्न नसक्ने कुराहरू घोषणापत्रमा लेखेका थिएनौं । कोभिडको संक्रमण नबढेको भए सायद घोषणापत्रमा लेखेको काम भन्दा धेरै पुरा गर्ने थियौं होला । पर्यटन विकास, शैक्षिक सुधार आदिको काम गर्ने भनेर हामीले घोषणापत्रमा लेखेका थियौं । पूर्वाधारको विकासमा पनि हामीले जोड दिइरहेको छौं ।
केही कामहरू त बाँकी पनि रहेको छ तर हाम्रो कार्यअवधी सकिदा बाँकी कामहरू पनि सक्छौं भन्ने आशा रहेको छ । घोषणापत्रमा लेखेको कुराले मात्र पालिकाको विकास हुँदैन । हामीले गर्छौं भनेको कुरा बाहेक अन्य विभिन्न कुराहरू पनि महत्वपुर्ण हुन सक्छन् भन्ने ठानेर समग्र पालिकाको विकास निर्माणमा जुटेका छौं ।
पालिकामा युवा स्वरोजगारका विभिन्न कार्यक्रमहरू रहेका छन् । युवाको सिप विकास गर्नको लागि विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गर्दै आएका छौं । केही युवाहरूले सिप सिकेर पालिकामा नै रोजगारी मूलक बनेका छन् । काम गर्न चाहने युवाहरूको लागि त धेरै ठाउँमा अवसर छ । केही युवालाई विकास निर्माणका काममा पनि लगाउँदै आएका छौं । गाउँपालिकाका धेरैजसो युवाहरू कृषि पेशामा संलग्न छन् ।
स्थानीय बासिन्दाको माग कसरी सम्बोधन गरिरहनुभएको छ ?
जनताको नजिकबाट स्थानीय क्षेत्रको सुरक्षा, विकास निर्माण, निर्वाचन तथा प्रशासनिक कार्य सञ्चालन निकाय तथा तह नै स्थानीय तह हो । हामी जनताबाटै निर्वाचित भएर आएका हौं । मानिसहरूको आवश्यकता असीमित हुन्छ । माग पनि धेरै हुन्छ । सबैको मागलाई पुरा गर्न नसके पनि प्राथमिक
ज्योति विकास बैंकले महिला उद्यमी महासंघका सदस्य र कर्मचारीलाई विशेष छुटमा कर्जा दिने